2010/03 - 2010/04 | ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှားရေးအသငျးခြုပျ
Home » Archives for 2010/03 - 2010/04
Dr Phyo Wai Kyaw | 8:02 AM | လွဲချက်ကယ်မနာရအောင် | ဒေါက်တာတင့်ဦး2Comments so far
တချို့က စာကို အပြစ်ကင်းစင်အောင် အဓိပ္ပါယ်မကောက်တတ်ဘူး။ အနှစ် (sprit of law) ပါအောင်လည်း မကိုးကားတတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျမ်းသိလျက် ကျမ်းညှိခက် လို့ ပြောကြတယ်။
အခု ဦးကောဝိဒ (မြိတ်) ရဲ့ ဟောဒီနေရာက နောက်ဆုံးပေါ်တရားအားထုတ်နည်း အမေးပုစ္ဆာ ဆောင်းပါးမှာ တရား အားထုတ်နည်း အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ရဲ့ brain washဆန်ဆန်၊ auto-suggestion ဆန်ဆန် ကျင့်စဉ်အဆန်းကို ဝေဖန်ပြထားတယ်။ "ဘာမှမဟုတ်ဘူး၊ ဘာမှမဟုတ်ဘူး"လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အတင်းအမိန့်ပေးနေတာဟာ အရှိကို အရှိအတိုင်းသိရမယ်ဆိုတဲ့ ဘူတံဘူတတောပဿတိနဲ့ မညီတာ၊ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တော်နဲ့ မကိုက်ညီတာ စတာတွေကို သူငှာသတ္တ၀ါ မမှားရအောင်၊ သံသယကင်းအောင် ဖြေကြားထားတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ အဝေဖန်ခံရတဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ တပည့်ဆိုသူက ဆရာကာကွယ်ရေး ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ကို ပို့လိုက်တယ်။ ဆရာလုပ်သူကတော့ မှားတဲ့ကိစ္စကို မှားမှန်း သိကောင်းပါတယ်။ သိလို့လည်းပဲ ပြုပြင်ပါမယ်လို့ သံဃနာယကဆရာတော်များ အချို့ဒါယကာများ သံဃာတော်များထံမှာ ၀န်ခံထားရတာတွေ ရှိတယ်။
အခုကတော့ တပည့်ဆိုသူတွေက ဆရာက မှားတယ် ၀န်ခံထားတဲ့ အသံသွင်းစကားတွေ၊ စာတွေ၊ လက်မှတ်တွေကိုတောင် မသိကျိုးကျွံပြုပြီး မှန်တဲ့အနေနဲ့ တလွဲ ဆံပင်ကောင်းလုပ်နေလေတော့ ဆရာထက် တပည့်လက်စောင်းထက်တယ်လို့ ပြောရမလိုတောင် ဖြစ်နေတယ်။ ဆရာတပည့် စကားတွေဟာလည်း မကိုက်ညီတော့ဘူး။
သူ့စာကတော့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဘွဲ့နဲ့ တရားတော်များကို ထုတ်နုတ်ပြီး သူ့ဟာနဲ့မကိုက်ကိုက်အောင် ကိုးကားထားတာပါ။ သူ့စာကို ကြည့်ကြရအောင်...
တစ်ခုခု အဖြစ် ရှိတာ ရှုနေလို့ရှိရင် ခိုင်တာမြဲတာ ရှုနေသာကြောင့် သဿတဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တယ်၊(မှန်ပါ) မရှိတာ ရှုမှ သာလျှင် သဿတဒိဋ္ဌိက လွတ်တယ် (မှန်ပါဘုရား)
ဒါဖြင့် စိတ်ရှုရှု၊ ဝေဒနာရှုရှု၊ ရုပ်ရှုရှု၊ အပျက်ကို မြင်စေရမယ်လို့ ပြောတာ (မှန်ပါဘုရား) ဒါဟာဘုရားဟော အထောက်အထား ရှိလို့ပြောတာ (မှန်ပါ)
"သမုဒယ ဓမ္မာနုပဿီဝါ ၀ယဓမ္မာ နုပဿီဝါ စိတ္တသ္မိံ ၀ိဟရတိ" -တဲ့၊ မဟာသတိပဋ္ဌာန် ပါဠိတော်ကြီးမှာ ပါတယ်၊ မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတာ (မှန်ပါ)
မဟာသတိပဋ္ဌာန် ပါဠိတော်ကြီးထဲမှာ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး က အတိအလင်း ဟောထားတာပဲ (မှန်ပါ) "သမုဒယ-၀ယ" မွေးလာပြီး သေသွားတာကို မြင်အောင် ကြည့်ရမယ် ဆိုတာလေ (မှန်ပါ) အဲဒီထိအောင် သွားရမှာ၊ အဲဒီကျတော့မှ ၀ိပဿနာဖြစ်တာ (မှန်ပါ)
ခုတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျားတို့က စာကို ရှေ့ပိုင်းတွင်ပဲဖတ်ပြီး ရှေ့ပိုင်းတွင်ပဲ ပြောနေကြတာ၊ ဒီနောက်ပိုင်း (သမုဒယဓမ္မာ နုပဿီဝါ - ၀ယဓမ္မာ နုပဿီဝါ) ထိအောင် လာရမှာ (မှန်ပါဘုရား )
မိုးကုတ် ဆရာတော် ဘုရားကြီး ကိုယ်တော်တိုင် ဟောပြောသော တရားတို့မှ ယူ၍ အကျဉ်းချူပ် ကောက်နုတ် ဖော်ပြပါမည်။ [မိုး(၂)နှာ-၄၅၆မှ။]
အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရန် အောက်ပါလင့်ရှိဆောင်းပါးများအား ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတော့ တင်ရမှာပေါ့လေ။
အဲဒီ စာကို ပြန်ဘို့ အတွက်က
၅)spirit of law and letter of law ဆိုတာဘာလဲ
ဆိုတဲ့ အသိတွေကို အရင်ပြောရမယ်။
ထေရ၀ါဒအစဉ်မှာပါဠိတော်ဆိုတဲ့ မြတ်ဘုရားရဲ့ နှုတ်ခပါတ်တော်သည် အခိုင်လုံဆုံး၊ အဋ္ဌကထာသည် ဒုတိယ၊ ဋ္ဋီကာသည် တတိယ၊ အာစရိယ၀ါဒသည် စတုတ္ထ ဒီလိုရှိတယ်။ ခုကိစ္စမှာ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)က ပါဠိတော်ဖြစ်သော မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်ကို ကိုးကားလာတဲ့ အခါမှာ တဘက်လူအနေနဲ့ (မဟာသတိပဋ္ဌာန သုတ် နောက်ပိုင်းကို ကိုးကားတာ မှန်သော်လည်း ) မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အာစရိယ၀ါဒကို ကိုးကားလာတာဟာ ကိုးကားမှုအလွဲဖြစ်နေပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ တင်ပြထားတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စူနာမီဆရာတော်ရဲ့ နည်းကို မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အပျက်ထိအောင် သွားရမယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ တန်းညှိလို့ မရပါ ။ ဆရာတော်ဘုရား ညွှန်ကြားနေတဲ့ ယောဂီတွေသည် ဥဒယဗ္ဗယဥာဏ် ရောက်နေသူတွေ ဖြစ်ပျက်မြင်နေသူတွေပါ ။ သူတို့ကို နောက်တဆင့် ဘင်္ဂဥာဏ်တက်ဘို့ညွှန်ကြားနေတာကို စူနာမီဆရာတော်ရဲ့ရုပ်နာမ်တောင် ဘာမှန်းမသိသေးသူတွေကို သွားပြောနေတဲ့ပရမတ်ကြောင်စကားတွေနဲ့တန်းညှိတာဟာ လွန်လှပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ဟောတာကို ရိုးရိုးသားသား သဘောကျနေသူတွေက ဒါကို သတိမထားမိကြဘူး။
အမှန်ကတော့ ၀ိပဿနာဥာဏ် တို့ ရဲ့သဘောသည် ခုန်ကျော်မရပါ။
စသည်စသည်ဖြင့် အဲလို အဆင့်ဆင့်တက်ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တာ နဲနဲလေး ရှင်းပရစေ
၃)မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားက ဘယ်ပရိသတ်ကိုဟောတာလဲ ။
ဒီလို ၀ိပဿနာဥာဏ်စဉ်အဆင့်ဆင့်ကို မိုးကုတ်ဆရာတော် မပစ်ခဲ့ပယ်ပါ။
ဖြစ်ပျက်မြင် (သမ္မာသန ၊ ဥဒ္ဒယဗ္ဗယ )
ဖြစ်ပျက်မုန်း ( ဘင်္ဂ၊ ဘယ၊ အာဒိန၀ )
ဖြစ်ပျက်ဆုံး ( မျဉ္စိတုကမျတာ ၊ပဋ္ဋိသင်္ခါ ၊ သင်္ခါရုပက္ခာ၊ အနုလောမ ၊ဂေါတြဘူ၊ မဂ် ) ဆိုပြီး အတိုချုံးပေးတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ခုစူနာမီကရော မိုးကုတ်ဆရာတော်ထက် တိုအောင်ချုံးတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့။ မိုးကုတ် ဆရာတော် ဘုရားသည် အဘိဓမ္မာပါရဂူ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ စာသင်စာချလာခဲ့သူ။ ကိုယ်တိုင်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အားထုတ်လာခဲ့သူ။ ပရိသတ်ကိုလဲ မေတ္တာကြီးလှသူပါ။ ဒီထက်ချုံးရ ချုံးပေးတာ ကြာပေါ့ဗျာ။ ဒီထက်လျှော့ရ မြွေပုဝိုင်းကြီး ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတာလိုဖြစ်နေလို့သာပါ။
နောက်ပြဿနာ တခုက မိုးကုတ်တရားတော်များပေါ် လူတွေ အထင်လွဲတတ်ကြတာပါ။ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေက အပုဒ်ပေါင်း ၁၃၀၂ ပုဒ် တင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ခုနေခါ အင်တာနက်မှာ ပြန့် နေတာ အပုဒ် ၈၀၀လောက် ရှိပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ အဲဒီတရားတော်တွေကို အနုအရင့်ခွဲထားတာ မရှိတော့ တပုဒ်တွေ့ တပုဒ်နာတဲ့သူရှိသလို ခုဆရာလေးလို လိုချင်တဲ့အပိုဒ်ဆွဲထုတ်လာပြီး ထင်ချင်ရာထင်တဲ့ သူလည်း မနဲပါ ။
အမှန်တော့ ဆရာတော်ဘုရား တရားတော်တွေဟာ အရေးကြီးတဲ့ မူမှာ မှန်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ဟောချိန်မှာ အများပရိဿတ်ဟောတာ။ စခါစယောဂီဟောတာ။ ရင့်ပြီးယောဂီဟောတာ။ စာတတ်ပြီး အလုပ်မလုပ်သေးတဲ့ပရိဿတ် ဟောတာဆိုပြီး ပရိဿတ် ပေါ်တည်ပြီး အနုအရင့်ကွဲပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ခွဲထားပါလား၊ ကိုယ်နဲ့တူရဲ့လား ဒါကို သတိထားမယ်။ အဲဒါကို သတိမထားဘဲ တွေ့ ရာကောက်နာပြီး အဖျားစွတ် ထင်ရာပြောသူတွေဟာ ဆရာတော်ဘုရားကို စွပ်စွဲတာပါဘဲ။
မည်သည့် ပညာရပ်မဆို (တရားတော်မှမဟုတ်ပါ ) လေ့လာပြီဆို မိမိဖြစ်စေချင်တာကို ဘေးဖယ်ထားရပါတယ် ။ မိမိဖြစ်စေချင် တာကို အသေဆုတ်ထားပြီး အထောက်အထားကို မိမိအယူနဲ့ ကိုက်အောင်ညှိပါက ဖိနပ်နဲ့ တော်အောင် ဖနောင့်လှီးတဲ့ လေ့လာမှုသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
၅)အနှစ်နဲ့အကာ( spirit of law and letter of law)
ရိုးသားတဲ့ သူ ဘယ်သူမဆို တရားတပုဒ်ကို ကိုးကားတော့မယ်ဆိုရင် အစကအဆုံးထိ ဖတ်ပြီး spirit of law ကို မပျက်အောင် တင်ပြရပါတယ်။ ခုလို လိုရာအပိုဒ်ကွက်ယူကာ letter of law ကိုယူတာဟာ မရိုးသားတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုတင်ပြချက်မှာ ဦးကောဝိဒကို စောဒက တင်ချင်ဇောနဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကို ပရိသတ်၊ ဟောရခြင်း အကြောင်း၊ ဟောစဉ်၊ ဆိုလိုရင်း တို့ ကို ဖျက်ပြီး အကြောင်းမဲ့ လာငြင်းတာမို့မိုးကုတ် ဆရာတော်ဘုရားကိုရော တရားတော် မူလပိုင်ရှင် မြတ်ဘုရားကိုပါ စွပ်စွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီစာရိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ စာရေးသူအနေနဲ့ရတနာ ၃ပါးအထူးသဖြင့် ကျေးဇူးတော်ရှင်များဖြစ်တဲ့ မူရင်းဆောင်းပါးရှင် ဦးကောဝိဒ(မြိတ်) နဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားတို့ ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့တရားတော်တို့ ရဲ့ ဂုဏ်ကိုသတိရပြီးရေးတာဖြစ်လို့ ကုသိုလ်မှုဖြစ်သော်လဲ လာငြင်းသူဆရာလေးနဲ့အပေါင်းပါတွေကို ဒါလောက်တုံးရလား (တုံးချက်ကယ် နာလှချည်းလား) ဆိုတဲ့ စိတ်လေးပါနေတာမို့အကုသိုလ် စေတနာလေးလည်း ရောလျက်ပါ ။ ကုသိုလ်အဘို့ဘာဂကိုရသလိုဘဲ အကုသိုလ်ကိုလဲ သံသရာတကွေ့ မှာ ပေးဆပ်ရမှာပါဘဲ။
အလားတူပါဘဲ ဆရာလွဲ အယူလွဲတစု ခမျာမှာလဲ အယူလွဲတာက တပြစ်၊ ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်နဲ့ အညီ ဆုံးမအပ်သော သံဃာကို အကြောင်းအကျိုးမမြင်သိဘဲ ကပ်ဖဲ့တိုက် ငြင်းတာက တပြစ်၊ မိုးကုတ် ဆရာတော် ဘုရားကိုရော တရားတော် မူလပိုင်ရှင် မြတ်ဘုရားကိုပါ စွပ်စွဲထားတာက တပြစ်ဖြစ်သော်လဲ ဒီစာလေးကို ဖတ်မိလို့ ဝိပဿနာစခန်းမှာ ဖြစ်စေ ။ မိုးကုတ်တရားတော် များမှာ ဖြစ်စေ မျက်စိလည်နေတဲ့ ယောဂီတယောက် အကျိုးရသွားရင် အဲကုသိုလ်ကို သူတို့လည်း ရမှာပါ ။
အကုသိုလ်မှုဖြစ်သော်လဲ ကုသိုလ်မှုဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အကုသိုလ် ၃ချက်အတွက် မဟာအ၀ီစိက သူတို့လွတ်တဲ့ အခါ သံသရာတကွေ့ မှာတော့ ဒီကုသိုလ်မှုလေးက အကျိုးပေးတန်ကောင်းပါရဲ့။
Posted by Dr Phyo Wai Kyaw at 8:02 AM2comments:
Dr Phyo Wai Kyaw | 9:04 AM | ဗာဟိရာနိစ္စသုတ် | ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့မရှုနှင့် Be the first to comment!
ရဟန်းတို့ အဆင်းတို့သည် မမြဲကုန်၊ မမြဲသော အဆင်းသည် ဆင်းရဲ၏၊ ဆင်းရဲသော အဆင်းသည်ကိုယ် 'အတ္တ' မဟုတ်၊ ကိုယ် 'အတ္တ' မဟုတ်သော အဆင်းကို ''ဤအဆင်းသည် ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်၊ ဤအဆင်းသည် ငါ မဟုတ်၊ ဤအဆင်းသည် ငါ၏ကိုယ် 'အတ္တ' မဟုတ်'' ဟု ဤသို့ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မှန်ကန်သော ပညာဖြင့် ရှုရမည်။ အသံတို့သည်။ အနံ့တို့သည်။ အရသာတို့သည်။ အတွေ့အထိတို့သည်။ သဘောတရားတို့သည် မမြဲကုန်။ မမြဲသော သဘောတရားသည် ဆင်းရဲ၏၊ ဆင်းရဲသော သဘောတရားသည် ကိုယ် 'အတ္တ' မဟုတ်၊ ကိုယ် 'အတ္တ' မဟုတ်သော သဘောတရားကို ''ဤသဘော တရားသည် ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ်၊ ဤသဘောတရားသည် ငါ မဟုတ်၊ ဤသဘောတရားသည် ငါ၏ ကိုယ်'အတ္တ' မဟုတ်'' ဟု ဤသို့ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မှန်ကန်သော ပညာဖြင့် ရှုရမည်။
ရဟန်းတို့ ဤသို့ ရှုသော အကြားအမြင်ရှိသော အရိယာတပည့်သည် အဆင်းတို့၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ အသံတို့၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ အနံ့တို့၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ အရသာတို့၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ အတွေ့အထိတို့၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ သဘောတရားတို့၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ ငြီးငွေ့သော် စွဲမက်မှု ကင်း၏၊ စွဲမက်မှုကင်းသော် ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်၏၊ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သော် ကိလေသာမှ ''လွတ်မြောက်ပြီ'' ဟု အသိဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်၏၊ ''ပဋိသန္ဓေနေမှု ကုန်ပြီ၊ မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးပြီးပြီ၊ မဂ်ကိစ္စကို ပြုပြီးပြီ၊ ဤမဂ်ကိစ္စအလို့ငှါ တစ်ပါးသော ပြုဖွယ် မရှိတော့ပြီ'' ဟု သိ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။4
၄ - ဗာဟိရာနိစ္စသုတ်၊ အနိစ္စဝဂ်၊ သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်။
ဒုက္ခ အနတ္တလည်း အနိစ္စနည်းမှီ၍ သိပါလေ...
အဆင်း အသံ အနံ့ အရသာ အတွေ့အထိတို့သည်ကား မမြဲ၊ မမြဲခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏၊
ဆင်းရဲသော ဤတရားတို့သည် ငါ၏ကိုယ် အတ္တမဟုတ်၊
ငါမဟုတ်၊ ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်၊ ဤသို့ သင်တို့ မှန်စွာရှုရမည်၊
ဘာမှမဟုတ်ဖူး... ဘာမှမဟုတ်ဖူး... ဟု ရှုရမည် မဟုတ်။
credit to- http://www.lknt.org/
Posted by Dr Phyo Wai Kyaw at 9:04 AM No comments:
Dr Phyo Wai Kyaw | 6:52 AM | ဒုဿီသို့သာ | မစိုးရိမ်စာသင်သား Be the first to comment!
Posted by Dr Phyo Wai Kyaw at 6:52 AM No comments:
Dr Phyo Wai Kyaw | 6:36 AM | ချစ်ငယ်ဒဿန | မစိုးရိမ်စာသင်သား Be the first to comment!
Posted by Dr Phyo Wai Kyaw at 6:36 AM No comments:
ကိုဦး(ထားဝယ်) | 7:03 AM | ဗုဒ္ဓသာသနာ Be the first to comment!
သာသနာဆိုသည်မှာ အဆုံးအမကိုခေါ်သည် ။ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမအတိုင်း လိုက်နာနေထိုင်
သူတို့ရှိရာ အိမ် ၊ ရပ်ရွာ ၊ မြို့ ၊ နိုင်ငံတို့သည် ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားသည်ဟု ဆိုရပေမည် ။ ကျောင်းကန်
ဘုရားများ ခံ့ညား ထည်ဝါစွာ တည်ဆောက်ထားသော်လည်း လူတွေက မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမကို
မလိုက်နာ မကျင့်ကြံပဲ တောင်တောင်အီအီ တွေကို ဗုဒ္ဓတရားအမည်ခံပြီး လုပ်နေကြလျှင် ၊ ရဟန်းသံဃာ
များကလည်း ပရိယတ္တိ ၊ ပဋိပတ္တိကို အား ထုတ်ခြင်း မပြုဘဲ လာဘ်လာဘပေါများရေးနှင့် ပေါ်ပင်လုပ်ငန်း
တွေကိုသာ လုပ်နေကြလျှင် ၊ သာသနာ၏ အနာဂတ်မျိုးဆက်ဖြစ်သော လူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်များ
အား ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို ခြေခြေမြစ်မြစ် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း မရှိလျှင် ၊ ထိုဒေသတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ
ကွယ်လေ တော့သည် ။ ကွယ်ခဲ့တာတွေလည်းများပြီ ။
၁၉၅၁ ခုနှစ်က ထုတ်သော စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲတွင် ထိုစဉ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ
၏ သုံးပုံတစ်ပုံရှိသည် ဟု တွေ့ရ၏ ။ ယခု ဘယ်လောက် ကျန်တော့သနည်း ။ ယနေ့ကမ္ဘာတွင် ---
ခရစ်ယာန် - သန်း ၂၀၀၀
မွတ်ဆလင် - သန်း ၁၂၀၀
ဟိန္ဒူ - သန်း ၁၀၀၀
ဗုဒ္ဓဘာသာ - သန်း ၃၅၀ ရှိသည်ဟု သိရသည် ။ ဘာသာကြီးလေးရပ်အနက် ဗုဒ္ဓဘာသာသည်
အနည်းဆုံး ဖြစ်သွားလေပြီ ။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ပင် ဖြစ်သည် ။
အမှန်တရားသည် တစ်ခါတစ်ရံ ခါးသီးတတ်လေသည် ။ သို့သော် မိမိ၏ ကျန်းမာရေးအတွက်
ဆေးခါးကြီးကို သောက်ရသလိုပင် အမှန်တရားကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရဲရပေမည် ။ ဗုဒ္ဓတရားကို နှစ်နှစ်ကာကာ
ယုံကြည်သူတိုင်း ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏ အဆုံးအမကို လိုက်နာသူတိုင်း ၊ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးတန်ဖိုး
ထားသူတိုင်း လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြရန် လိုနေလေပြီ ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် မိမိဟောကြားသော တရားအတိုင်း လိုက်နာနေထိုင် ကျင့်ကြံ ခြင်းကိုသာ
လိုလားတော်မူသည် ။ ၀က္ကလိ ရဟန်းကြီးအား ဟောကြားချက် ၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင် တော်မမူမီ အာနန္ဒာအား
မှာကြားချက်တို့က ဤအချက်ကို ထင်ရှားစေသည် ။ မြတ်စွာဘုရားအား ပစ္စည်းဝတ္ထုဖြင့် ပူဇော်ခြင်းနှင့်
(ဘုရားဆုံးမသည့်အတိုင်း လိုက်နာသော ) အကျင့်ဖြင့် ပူဇော်ခြင်း ဟူ၍ ပူဇော်ခြင်း နှစ်မျိုး ရှိသည့်အနက်
မြတ်စွာဘုရားက အကျင့်ဖြင့် ပူဇော်ခြင်းကို ပို၍ လိုလားတော်မူလေသည် ။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ဗောရောဗုဓောဘုရားကြီးသည် လည်းကောင်း ၊ အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ
ဘာမီယန်အရပ်ရှိ ကျောက်တောင်ကို ထွင်းထားသော ဆင်းတုတော်များသည် လည်းကောင်း ၊
အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်နီပေါနိုင်ငံရှိ မြတ်စွာဘုရား၏ အထိမ်းအမှတ်ဌာနများသည် လည်းကောင်း ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်များ
ဖြစ်ကြသလို ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာများ ဖြစ်ကြ၏ ။ သို့သော်လည်း ထိုနိုင်ငံရှိ
လူများကား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ မဟုတ်ကြပြီ ။
Posted by ကိုဦး(ထားဝယ်) at 7:03 AM No comments:
hinthatathar | 8:46 AM | 1 Comment so far
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒမိုးပြာဂိုဏ်းချုပ် ဦးဥာဏနှင့် အပေါင်းအပါ (5)ဦးအား ဖေဖော်ဝါရီလ 12 ရက်(ပြည်ထောင်စုနေ့)က မန္တလေးတိုင်း ရန်ကင်း တောင်ခြေရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ(မိုးပြာခြံ) အဆောက်အအုံတွင် သက်ဆိုင်ရာမှ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နောက် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံးတွင်ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ယခုလ(မတ်လ) 11 ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တ ရားရုံးမှပင် သာသနာညှိုးနွမ်းစေမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉၅(က)အရ ထောင်ဒဏ်လေးနှစ်ကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ အခြားအရေးပါသည့် မိုးပြာဂိုဏ်းဝင်များအားလည်း ဆက်လက် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ် နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Posted by hinthatathar at 8:46 AM 1 comment:
ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှါးရေးအသငျးခြုပျ၏ ရညျရှကျခကျြနှငျ့ ဝဖေနျသူမြားသို့ဖွရှေငျးခကျြ
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 12:03 AM |5Comments so far
လောကဥပဒေ၊ ဓမ်မဥပဒေ ဟူ၍ ဥပဒေ နှဈမြိုးရှိသညျ။
လောကဥပဒေ-ဆိုသညျမှာ လောကသားတို့ လိုကျနာရနျအတှကျ သကျဆိုငျရာက ခမြှတျထားသော စညျးကမျး၊ ဘောငျ၊ ကလနား- မြား ဖွဈ၍၊ ဓမ်မဥပဒေ ဆိုသညျမှာ ဘုရားသားတျောတို့ လိုကျနာရမညျ့ ဗုဒ်ဓကိုယျတျောတိုငျ မိနျ့မွှကျတျောမူခဲ့သညျ့ စညျးကမျးနညျးလမျးမြား ဖွဈသညျ။
ထို ဥပဒေ နှဈမြိုးသညျ မြားသောအားဖွငျ့ အနုရောဓ- လိုကျလြောညီထှမှေု့ရှိတတျသျောလညျး တဈခါတဈရံ၌မူ ဝိရောဓိ ဆနျ့ကငျြဘကျ သဘောမြိုး သကျရောကျနသေညျလညျး ရှိတတျပါသညျ။ ဥပမာ- သာသနာတျော၌ အဓမ်မဝါဒီ တဦးပျေါပေါကျလာခဲ့လြှငျ ဓမ်မဥပဒေ က မကျြနှာမပွဝံ့အောငျ၊ ခေါငျးမဖျောဝံ့အောငျ နာမညျတပျ၍ နှိပျကှပျခှငျ့ ရှိပါသညျ။ သို့သျော- လောကဥပဒေ အရ အဓမ်မဝါဒီကို နာမညျတပျ၍ တိုကျရိုကျသုံးစှဲခှငျ့ တိုကျရိုကျနှိပျကှပျခှငျ့ မရှိပါ။ ထိုအခါမြိုး၌ ဘုရားသားတျောတို့ မကျြစိမိတျ၍ ရှေးခယျြရတတျပါသညျ။ ဓမ်မဥပဒသေဘောတရား တရားအရ ဥပမာဖွငျ့ ထငျစှာ ပွရလြှငျ အဒိန်နာဒါန သိက်ခာပုဒျ အရ ပိုငျရှငျမပေးသော သူတပါး၏ ဥစ်စာကို ခိုးယူသော သူသညျ ခိုးယူဆဲခဏပငျ ခိုးမူ့မွောကျ၍ သိက်ခာပုဒျပကျြဆီးက သူခိုးအဖွဈသို့ ရောကျ၏။ ထိုနညျးတူ ရဟနျးတျောတို့ စောငျ့ထိနျးအပျသော ဝိနညျးသိက်ခာပုဒျတှငျ ဒုတိယပါရာဇိက သိက်ခာပုဒျအရ ရဟနျးတဈပါးသညျ တဈမတျထကျ အဖိုးထိုကျတနျသော ပိုငျရှငျမပေးသော သူတပါး၏ ဥစ်စာကို ခိုးယူမညျဟူသော စိတျအကွံအစညျဖွငျ့ ခိုးမညျ့ အရာဝတ်ထု ပစ်စညျးကိုကိုငျလိုကျသော အခါ ထိုပစ်စညျး နရောမှ လကျတဈဆဈခနျ့ ရှသှေ့ားလြှငျပငျ ခိုးမူ့မွောကျ၍ ဒုတိယပါရာဇိက သိက်ခာပုဒျ အရ ပါရာဇိက ကကြာ ရဟနျးဘဝပကျြဆီး ဆုံးရှုံးရပါ၏။ အထကျပါ အခကျြလကျတို့ကို ကွညျ့လငျြ တခွားသူ တစုံတဈယောကျ ဆုံးဖွတျခကျြခပြေးမှာသာလငျြ ထိုအပွဈသညျ သကျရောကျသညျ မဟုတျ ကာယရှငျ ကိုယျတိုငျက ခိုးမူ့ကြူးလှနျဆဲ အခိုကျတနျ့မှာပငျ အပွဈသကျရောကျသညျမှာ ဓမ်မနညျးလမျးကွောငျးအရ ကွညျ့လငျြ ထငျရှားပါသညျ ထိုနညျးတူစှာပငျ ဓမ်မစတေီ ဥိးကောသလ်လ နှငျ့ အခွားသော အဓမ်မဝါဒီမြားအားနာမညျတပျ၍ အဓမ်မဝါဒီ ဟု ဆိုခွငျးသညျ သကျဆိုငျရာမှ ဆုံးဖွတျခကျြမခရြသေးသျောလညျး သူတို့ ဟောသော တရားမြားကို သုံးသတျ၍ အဓမ်မဝါဒီ ဖွဈသညျဟု ဆုံးဖွတျခကျြ ခရြပမေညျ။ အခိုငျမာ ဖွဈစရေနျ အင်ျဂုတ်ထိုလျလာ ဘုရားဟော တရားတျောမြားဖွငျ့ ထုတျပွရလြှငျ
“ယတေေ ဘိက်ခဝေ ဘိက်ခူ အဓမ်မံ ဓမ်မောတိ ဒီပန်ေတိ၊ တေ ဘိက်ခဝေ ဘိက်ခူ ဗဟုဇန အဟိတာယ ပဋိပန်နာ ဗဟုဇန အသုခါယ ဗဟုနော ဇနဿ အနတ်တာယ အဟိတာယ ဒုက်ခာယ ဒဝေမနုဿာနံ။ ဗဟုဉ်ဖ တေ ဘိက်ခဝေ ဘိက်ခူ အပုညံ အသဝန်တိ၊ တစေိမံ သဒ်ဓမံ အန်တရ ဒါပန်ေတီ တိ။ (အင်ျဂုတ်ထိုလျ၊ ၁၊ ၁၈-၁၉)
ရဟနျးတို့ အကွငျရဟနျးတို့သညျ တရားစဈတရားမှနျ မဟုတျသော အဓမ်မကို တရားစဈတရားမှနျဖွဈသော ဓမ်မဟုလညျးကောငျး၊ တရားစဈတရားမှနျ ဖွဈသော ဓမ်မကို တရားစဈတရားမှနျမဟုတျသော အဓမ်မဟုလညျးကောငျး၊ ဝိနညျးစဈ ဝိနညျးမှနျ မဟုတျသော အဝိနယ ကို ဝိနညျးစဈ ဝိနညျးမှနျဖွဈသော ဝိနယ ဟုလညျးကောငျး၊ ဝိနညျးစဈ ဝိနညျးမှနျ ဖွဈသော ဝိနယ ကို ဝိနညျးစဈ ဝိနညျးမှနမဟုတျသော အဝိနယ ဟုလညျးကောငျး၊ မွတျစှာဘုရား ဟောအပျ ပွောအပျသညျကို မွတျစှာဘုရား မဟောအပျ မပွောအပျဟု လညျးကောငျး၊ မွတျစှာဘုရား မဟောအပျ မပွောအပျသညျကို မွတျစှာဘုရား ဟောအပျ ပွောအပျဟု လညျးကောငျး၊ မွတျစှာဘုရား အလအေ့ကငျြ့ မပွုအပျသညျကို မွတျစှာဘုရား အလအေ့ကငျြ့ ပွုအပျ၏ ဟုလညျးကောငျး၊ မွတျစှာဘုရား အလအေ့ကငျြ့ ပွုအပျသညျကို မွတျစှာဘုရား အလအေ့ကငျြ့ မပွုအပျ ဟုလညျးကောငျး၊ မွတျစှာဘုရား မပညတျအပျသညျကို မွတျစှာဘုရား ပညတျအပျ၏ ဟုလညျးကောငျး၊ မွတျစှာဘုရား ပညတျအပျသညျကို မွတျစှာဘုရား မပညတျအပျ ဟုလညျးကောငျး ပွုကွကုနျ၏ ရဟနျးတို့ ထိုရဟနျးတို့သညျ လူအမြားစီးပှါးခမျြးသာမဲ့ခွငျး၊ အကြိုးမဲ့ခွငျး၊ နတျလူတို့ အစီးပှါးမဲ့ခွငျး၊ ဆငျရဲခွငျးငှါကငျြ့သညျ မညျကုနျ၏။ ရဟနျးတို့ ထိုရဟနျးတို့သညျ မြားစှာသော အကုသိုလျကို ဖွဈပှါးစသေညျ မညျကုနျ၏ ဟု ဟောတျောမူအပျပါသညျ။ တရားစဈတရားမှနျ မဟုတျသော အဓမ်မကို တရားစဈတရားမှနျဖွဈသော ဓမ်မဟုလညျးကောငျး၊ တရားစဈတရားမှနျ ဖွဈသော ဓမ်မကို တရားစဈတရားမှနျမဟုတျသော အဓမ်မဟုလညျးကောငျး၊ မွတျစှာဘုရား ဟောအပျ ပွောအပျသညျကို မွတျစှာဘုရား မဟောအပျ မပွောအပျဟု လညျးကောငျး၊ မွတျစှာဘုရား မဟောအပျ မပွောအပျသညျကို မွတျစှာဘုရား ဟောအပျ ပွောအပျဟူသော အခကျြမြား အရ ယခု ဓမ်မစတေီ ဦးကောသလ်လ နှငျ့ အခွားသော အဓမ်မဝါဒီ အဖှဲ့မြား ဟောပွောနသေော တရားမြားသညျ အဓမ်မ ကို ဓမ်မ ဟုပွခွငျးစသညျဖွငျ့ လူအမြားစီးပှါးခမျြးသာမဲ့ခွငျး၊ အကြိုးမဲ့ခွငျး၊ နတျလူတို့ အစီးပှါးမဲ့ခွငျး၊ ဆငျးရဲခွငျးငှါ ဟောပွောနေ၍ မြားစှာသော အကုသိုလျတို့ကို ဖွဈပှါးစကောသာသာနာတျောကွီး ကှယျပြောကျအောငျ ပွုလုပျနသေညျမှာ ဆိုအပျခဲ့ပွီးသော အထောကျထားမြားဖွငျ့ထငျရှားနပေါသညျ။
နိုငျငံတျောသီးခွားဝိနညျးဓိုရျအဖှဲ့က အဓမ်မဝါဒ အဖွဈဆုံးဖွတျပွီးသော ဆူးလဦေးမွငျ့သိနျး ၏ အဓမ်မတရား ဘုရားဟောမဟုတျသော မဟုတျမမှနျတရားမြားကို ဓမ်မစတေီ ဦးကောသလ်လ က ပွနျလညျဟောပွောနခွေငျးမှာ ညှနျကွားလှာ အမှတျ ၅၀ နှငျ့ ၉၄ အထောကျမြားအရ ခိုငျမာသော သကျသဖွေဈတယျဆိုတာလညျး ထငျရှားပါသညျ။ ထို့ပွငျ အဓမ်မဝါဒ အဖွဈဆုံးဖွတျပွီးသော စာအုပျစာတနျးမြားကို မိတ်ထူကူး၍ ဖွနျ့ခြီနသေညျမှာလညျး ကွားသိတှမွေ့ငျနရေ၏။ သံဃာ့အဖှဲ့အစညျး အခွခေံစညျးမဉျြး အတိုငျး ထုတျဖျောပွရအုံးမညျ ဆိုလြှငျ စာမကျြနှာ (၂၀) အခနျး (၁)၊ အပိုဒျ (၂)၊ အပိုဒျခှဲ (က) ၌ “သာသာနာ ဆိုသညျမှာ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား၏ အဆုံးမတျောကို ဆိုသညျ” ဟု လညျးကောငျး၊ အပိုဒျခှဲ (င) ၌ “ထရေဝါဒ ဆိုသညျမှာ ပထမသင်ျဂါယနာမှ ဆဌသင်ျဂါယနာ အထိ သင်ျဂါယနာခွောကျတနျ တငျထားသော ပါဠိတျော၊ အဌကထာ၊ ဋီကာ အစရှိသော ပိဋကတျကို ဆိုလိုသညျ” ဟု လညျးကောငျး အခွခေံစညျးမဉျြး အခနျး (၂)၊ အပိုဒျ (၁၂)၊ အပိုဒျခှဲ (ဂ) ၌ ပရိယတ်တိသာသနာတျောကို တိုးတကျစညျပငျ ပွနျ့ပှါးစရေနျနှငျ့ ပိဋကတျတျောနှငျ့ မညီသော ရေးသေားခွငျး၊ ဟောပွောခွငျး၊ ပွသခွငျး၊ ပွုလုပျခွငျးမြားကို တားဆီးကာကှယျရနျ ဖွဈသညျဟုလညျးကောငျး ပွဆိုထားပါသညျ။ ဤ ပွဆိုခကျြမြားအရ မွတျစှာဘုရား၏ အဆုံးမသာသနာတျောဖွဈသော ပထမသင်ျဂါယနာ မှ ဆဌသင်ျဂါယနာ အထိ သင်ျဂါယနာခွောကျတနျ တငျထားသော ထရေဝါဒ ပါဠိတျော၊ အဌကထာ၊ ဋီကာ အစရှိသော ပိဋကတျတျောနှငျ့ မညီသော ရေးသားခွငျး၊ ဟောပွောခွငျး၊ ပွသခွငျး၊ ပွုလုပျခွငျးမြားကို အရေးယူ တားဆီးကာကှယျနိုငျသညျ ဟု ပါရှိပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မသိနားမလညျကုနျသော ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြားအား မဟုတျမမှနျတရားမြားကို လိငျလညျလုပျကွံ၍ဟောပွောနသေော ဓမ်မစတေီ ဦးကောသလ်လ ဆူနာမီ ဦးဥတ်တမသာရ၊ ကြျောဟိနျး၊ ခဈြငယျ၊ ဦးအေးမောငျ၊ ပါရဂူ စသော ပုဂ်ဂိုလျမြားကို အဓမ်မဝါဒ အဖွငျ့ သကျဆိုငျရာမှ ဆုံးဖွတျခကျြ မခသြေးသျောလညျး အဓမ်မဝါ ဖွဈသညျ ဟု ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှါးရေး အသငျးခြုပျမှ အခိုငျအမာ ဆိုခဲ့ပသေညျ။ ဆကျ၍ ဆိုဦးအံ့......... သာသနာတျော၌ အဓမ်မဝါဒ အဝိနယဝါဒီမြား ပျေါပေါကျလာခဲ့ပွီ ဆိုလြှငျ အနုနညျးနှငျ့ ဖွရှေငျးရသညျလညျးရှိသညျ၊ အကွမျးနညျးဖွငျ့ ဖွရှေငျးရသညျလညျး ရှိသညျ၊ တဈပါးတညျး ဖွရှေငျးရသညျလညျး ရှိသညျ၊ အုပျစုဖှဲ့၍ အငျးအားသုံးပွီး ဖွရှေငျးရသညျလညျး ရှိသညျ။ ဤ ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှါးရေး အသငျးခြုပျ သညျ သာသနာတျော၌ ပျေါပေါကျလာသော အဓမ်မဝါဒ အဝိနယဝါဒီမြားကို ဖွရှေငျးနိုငျရနျအတှကျ ဖှဲ့စညျး တညျထောငျခဲ့ခွငျး ဖွဈပေ၏။ အခါတဈပါး၌ မွတျစှာဘုရားသညျ သံဃာ့ပရိသတျနှငျ့ တကှ ဥပုသျပွုရနျ ဥပုသျအိမျထဲ၌ သီတငျးသုံးတျောမူလကျြရှိပါသညျ။ ထိုအခါ သံဃာ့ပရိသတျထဲတှငျ ဒုဿီလ-သီလမဲ့ ရဟနျးတပါးပါဝငျနေ၍ မွတျစှာဘုရားက ဥပုသျပွုတျောမမူဘဲ ထိုငျလကျြသာ သီတငျးသုံးတျောမူပါသညျ။ ဤသို့ ညဉျ့သုံးယာမျပတျလုံး ကုနျဆုံးသှားသညျ့ အခါ အရှငျမောဂ်ဂလာနျက အဘိညာဉျ တနျခိုးဖွငျ့ ကွညျ့တျောမူသော အခါ ဒုဿီလရဟနျးတပါးကို တှမွေ့ငျ၍ သုံးကွိမျတိုငျ အပွငျထှကျဖို့ တောငျးပနျရှာပါသညျ။ သုံးကွိမျတောငျးပနျလကျြ မရသော အခါ အရှငျမောဂ်ဂလာနျသညျ ဒုဿီလပုဂ်ဂိုလျကို လကျမောငျကိုကိုငျ၍ အပွငျသို့ ဆှဲထုတျခဲ့ပသေညျ။ (ဥပေါသထသုတျ၊ အံ၊ ၃၊ ၄၄/၅) ဤဝတ်ထုကို ထောကျလြှငျ သာသနာတျော၏ ခလုတျဆူးညောငျ့မြား အငျအားမကောငျးပါက တဈပါးတညျးဖွငျ့ သုတျသငျ ရှငျးလငျးသညျ့ အစဉျလာရှိခဲ့သညျကို တှမွေ့ငျရပမေညျ။ သို့တညျးမဟုတျ သာသနာ့ရနျဆူးရနျငွောငျ့ကို အုပျစုဖှဲ့၍ မိုကျတှငျးနကျနပေါလြှငျ အငျအားသုံး၍ ခမြှေုနျးရနျ ဘဘုရားရှငျကိုယျတျောတိုငျ ခှငျ့ပွုခဲ့သညျကို တှရှေိ့ရပသေညျ။ အခါတဈပါး၌ ကီဋာဂီရိဂိုဏျးသာ ရဟနျးမြားသညျ ကုလဒူသကအနသေန မြိုးစုံဖွငျ့ သာသနာကို ဖကျြစီးလကျြရှိရာ မွတျစှာဘုရားက အရှငျသာရိပုတွာနှငျ့ အရှငျမောဂ်ဂလာနျ တို့ကိုချေါ၍ “ခဈြသားတို့၊ ကီဋာဂီရိဇနပုဒျကို သှားကွ၊ သာသနာ့ရနျဆူးရနျငွောငျ့တို့ကိုမောငျးထုတျကွ” ဟု စခေိုငျးတျော မူပါသညျ။ ထိုအခါ အရှငျသာရိပုတွာက “စဏ်ဍာ တေ ဘိက်ခူ ဖရုသာ- မွတျစှာဘုရား၊ အဲဒီရဟနျးတှဟော ခကျထနျကွမျးကွုတျလှပါတယျဘုရား၊ ဘယျလိုပုံမြိုးဖွငျ့ နှငျထုတျရပါမလဲ ဘုရား” ဟု လြှောကျတျောမူပါသညျ။ ထိုအခါ မွတျစှာဘုရားက “တနေ ဟိ တုမှေ သာရိပုတွာ ဗဟုကဟေိ ဘိက်ခူဟိ သဒ်ဓိံဂစ်ဆထ- ဒါဆိုရငျ ရဟနျးမြားစှာ ချေါသှား အငျအားသုံးပွီး နှငျထုတျကွ” ဟု နညျးပေးခှငျ့ပွုတျောမူခဲ့ပါသညျ။ အဂ်ဂသာဝက နှဈပါးလညျး ရဟနျးမြားစှာ ချေါသှားကာ သာသနာ့ရနျဆူးရနျငွောငျ့တို့ကို အပွီးတိုငျ ခုတျထှငျရှငျးလငျး သုတျသငျတျောမူခဲ့ပသေညျ။ ဤဝတ်ထုကို သာဓက ပွုလြှငျ အဓမ်မဝါဒီတို့ အားကောငျးပါက အငျအားသုံး၍ ခမြှေုနျးသညျ့ အစဉျလာသညျ မွတျစှာဘုရားလကျထကျကတညျးက ရှိခဲ့သညျဆိုတာကို သဘောပေါကျရပမေညျ။ ဆကျ၍ ဆိုဦအံ့ မွတျစှာဘုရား၏ သာသနာတျောမညျသညျကား ခိုငျခံ့သော ဥပဒဖွေငျ့ တညျဆောကျထားသညျ့ ဓမ်မဝိနယ နိုငျငံတျောဖွဈသညျ။ သို့ဖွဈ၍ ခရီးသှားဟနျလှဲသဘောမြိုးဖွငျ့ သှားရငျးလာရငျး သငျ့ရောကျလရှေိ့သော အပွဈမြားဆိုလြှငျ တဈပါးနှငျ့တပါး အပွနျအလှနျ တောငျးပနျခွငျးဖွငျ့ ကုစားရသညျ။ ထို့ထကျကွီးမားသော ပွဈမှု့ကို ကြူးလှနျမိလြှငျ သံဃာတျောမြား ခှငျ့လှတျနိုငျ သညျအထိ ပရိဝါသျဆောကျတညျပွီး ကုစားရသညျ။ အကွီးမားဆုံး ဥပဒကေို မကျြကှယျပွုလာလြှငျမူကား လူဝတျလဲတနျ လဲ၍လညျးကောငျး၊ လူခြှတျတနျ ခြှတျ၍လညျးကောငျး အပွဈပေး နှိပျကှပျရပသေညျ။ ဤကား ဝိနညျးဥပဒကေို ခြိုးဖောကျလာပါက နှိပျကှပျပုံ နှိပျကှပျနညျးကို ပွဆိုခွငျး ဖွဈပါ၏။ ဓမ်မဥပဒကေို ခြိုးဖောကျလာပါက ရောကျရာအရပျ၊ ကွားရာအရပျမှ မရပျမနားပဲ အပွေးသှား၍ ဆုံးမရသညျ။ ဆုံးမမရက နှိပျကှပျရသညျ။ အရှကျရအောငျ မကျြနှာမဖျောနိုငျအောငျ ခေါငျးမထောငျနိုငျအောငျ ဝိုငျးဝနျးနှိမျနှငျးရသညျ။ နောငျအခါ ဤကဲ့သို့ အဓမ်မဝါဒီမြား မပျေါပေါကျရအောငျ ခကျြခွငျးလကျငငျး ဦးခြိုးနှိပျကှပျရသညျ။ မွတျစှာဘုရားသညျ ဥပဒဖွေငျ့ တညျဆောကျထားသော ဓမ်မနိုငျငံတျော၌ ဓမ်မဥပဒေ ကို ခြိုးဖောကျသူကို တှရှေိ့လာလြှငျ ကိုယျတျောတိုငျနှိပျကှပျရုံသာမက သူ၏ သာဝကမြား ကိုလညျး နှိပျကှပျစခေဲ့သညျ။ ယုတျစှအဆုံး အနာထပိဏျသူဌေးကွီးက တိတ်ထိဂိုဏျးဆရာ ကွီးမြားနှငျ့ တရားဆှေးနှေးရငျး တိတ်ထိဂိုဏျးဆရာကွီးမြား မဖွနေိုငျအောငျ ပွဿနာမြား မေး၍ နှိပျကှပျသညျကိုပငျ ဝမျးမွောကျဝမျးသာ သာဓုချေါတျောမူခဲ့ပသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ အသငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဝဖေနျသူမြားသို့ ပွောကွားလိုပါသညျ။ လောကဥပဒကေိုသာ နားလညျပွီး ဓမ်မဥပဒကေို နားမလညျဘဲ ဆရာကွီးလသေံမြိုးဖွငျ့ အရှကျမရှိ စီဘောကျမှာ လာရောကျပွောဆိုမနပေါနဲ့ ဝဖေနျနိုငျစှမျးရှိလြှငျ ပို့ဈရဲ့ အောကျမှာ နာမညျတပျ၍ တရားဝငျဆှေးနှေးနိုငျသညျ။ တခုတော့ သိထားရပမေညျ လောက ဘကျမှ ရပျတညျ၍ ဓမ်မကို မကျြကှယျပွုသူမြား မဖွဈဖို့ အရေးကွိးပသေညျ။ လောက ဘကျမှ ရပျတညျ၍ ဓမ်မကို မကျြကှယျပွုသူမြားဆိုသညျမှာ အရှကျမရှိသူ၊ သိက်ခာမဲ့သူ၊ အတ်တဆနျသူ၊ ဓမ်မကို တနျဖိုးမထားသူ၊ တဈဘ၀ တဈနပျစာကိုသာ မကျမောသူ၊ မြိုးမစဈသူ၊ အမြားမကျြနှာသာကွညျ့၍ ဘုရားမကျြနှာ မကွညျ့သူမြားကို ဆိုလိုပါသညျ။ ကမျြးကိုး ကမျြးကားနှငျ့ အထောကျထားပွကာ လကျခံနိုငျအောငျ ဆှေးနှေးမယျဆိုရငျ အခြိနျမရှေး ဖိတျချေါသညျ။ ဤ ဓမ်မဥပဒေ ပွနျပှါးရေး အသငျးခြုပျ သညျ မွတျဗုဒ်ဓ သာဓုချေါမညျ့ အလုပျမြိုးကို လုပျနမေညျ့ ဘုရားရှငျ၏ တပညျ့သား သံဃာမြား နှငျ့ ဥပသကာ မြားဖွဈ၏။ မွတျစှာဘုရားသကျတျောထငျရှား ရှိစဉျက ဓမ်မစတေီ ဦးကောသလ်လ ဆူနာမီ စသညျတို့ကဲ့ အဓမ်မဝါဒီမြိုးမြား ပေါပေါကျခဲ့ဘူးပသေညျ။ ထိုကဲ့သို့ အဓမ်မဝါဒီမြိုးပျေါပေါကျလာလြှငျ မွတျစှာဘုရားကိုယျတျောတိုငျ ခေါငျးမဖျောနိုငျအောငျ မကျြနှာမပွဝံ့လောကျအောငျ၊ အရှကျရအောငျ နှိပျကှပျတျောမူခဲ့ပသေညျ။ ကဝေဋ်ဋ၏သား သာတိရဟနျးကို ဤနညျးဖွငျ့ နှိပျကှပျပွလိုကျခွငျးမှာ “ခဈြသားတို့၊ အနာဂတျ သာသနာ၌ ဒီလို မိစ်ဆာကောငျတှေ ပျေါပေါကျလာလြှငျ ဒီလို ပွောငျပွောငျတငျးတငျး နှိမျနှငျးကွ” ဟု လမျးဖှငျ့ပေးခဲ့ခွငျးပငျ ဖွဈ၏။ မိစ်ဆာဝါဒီ နောကျလိုကျ လကျပါးစတေပညျ့မြားသို့ အတိအလငျး ကညြောလိုကျမညျ ပွောငျပွောငျတငျးတငျး နာမညျတပျ၍ အရေးမခံခငျြလြှငျ မွတျစှာဘုရား သာသနာကို ပွောငျပွောငျတငျးတငျး မစျောကားကွနဲ့.......................
ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှါးရေး အသငျးခြုပျ
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 12:03 AM5comments:
အိန္ဒိယပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာကြောင့်ကွယ်ခဲ့သလဲ
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 9:41 PM | သီတဂူဆရာတော် | သုတ Be the first to comment!
ဆိုတာ ဘုန်းကြီးတို့ လေ့လာလို့
ရသလောက် ပြောရရင် အခြေခံအကြောင်း ၃-ခုကို တွေ့ရပါတယ်။
၁။ ဇာတ်ဝါဒ အလွန်ပြင်းထန်ခြင်း၊ (လူတန်းစား ခွဲခြားမှု့)
၂။ အတ္တ၀ါဒ အလွန်ပြင်းထန်ခြင်း၊ (အစွဲကြီးမှု့)
၃။ သဒ္ဓါတရားနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် အိန္ဒိယပြည်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။
အနှစ်ကိုးပါးတရားတော် (သီတဂူဆရာတော်) -စာအုပ်ကို ၀ယ်ယူ၍ ဖတ်ရှူကြလေကုန်......
နောက်တခု သာသနာကွယ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းက ဘာလဲဆိုရင် လူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ
ဘာသာခြားတွေက သဒ္ဓါတရား ခေါင်းပါးတော့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်တော့တာပဲ။ အရာရာမှာ
ကိုယ့်ဘာသာ ရှေ့တန်းက နေရာရဖို့၊ အသာစီးရဖို့၊ ခေါင်းတစ်လုံးသာဖို့ ဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့
စိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ သူများဘာသာက ကိုယ့်ဘာသာထက် သာသွားမှာကို မလိုလားဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အရှိန်အ၀ါ ကောင်းမှာကို မလိုလားဘူး။ ဒီတော့ မနာလိုစိတ်တွေ ပြင်းထန်လာတယ်။
ဒါကြောင့် ဘာသာခြားများက ဗုဒ္ဓသာသနိက အဆောင်အဦ တွေကို ဖျက်ဆီးတယ်။
သတိမူရင် မြူကို မြင်တယ်
နာလန္ဒာ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ကြီးဆိုရင် တချိန်တုံးက သိပ်အောင်မြင်ခဲ့တာပဲ။ ဒီလိုအောင်မြင်တာကို
မလိုလားတဲ့ ဘာသာခြားတွေက တက္ကသိုလ်ကြီးကို မီးရှိူ့ပြီး ဖျက်ဆီးတယ်။
သံဃာတွေကို ညှင်းပန်း နှိပ်စက်တယ်။
သတိမူရင် မြူကို မြင်တယ်။ သတိမမူရင်တော့ ဂူကိုတောင် မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဒီလို မမြင်ခဲ့ကြလို့
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ဘာသာခြားအဆောက်အဦးတွေ မင်းမူနေတာကို
ပြီးတော့ ရှိသေးတယ်။ ဗောဓိပင်ကြီးနဲ့ မဟာဗောဓိစေတီတော်ကြီးကို `မဟန့်´ ဆိုတဲ့
ဟိန္ဒူဘုန်းကြီးက အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ အဆောက်အဦတွေကို မကြည့်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်
`ဒါတွေပျောက်အောင် ငါလုပ်လေမှပဲ´ ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာ ပျောက်လုမတတ် ဖြစ်သွားတယ်။
မင်းတုန်းမင်းကြီးရဲ့ ဇရပ်ကို ဖျက်ပြီးတော့ သူ့ကျောင်းဆောက်ထားတာကို ကြည့်ပါ။
ဗောဓိစေတီကြီးထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို သွင်းထားတာကိုလည်း ကြည့်ပါဦး။
ဘယ်လောက်ထိ ရက်စက်သလဲဆိုတာ ထင်ရှားလှပါတယ်။
အဲဒါ အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်လို့သာ။ မထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် ဒီနေရာ ဗုဒ္ဓစေတီ လို့ မပြောဘဲနဲ့
ဟိန္ဒူတို့ရဲ့ ဘုရားကျောင်းကြီး ဖြစ်မှာ။ ဘာသာခြားတို့ရဲ့ ဖျက်ဆီးခြင်းဟာလည်း သာသနာ
ကွယ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းတခုပါပဲ။ အဲဒါ သဒ္ဓါတရား ခေါင်းပါးလာလို့ပါပဲ။
မြေမျိုလို့ လူမျိုးမပျောက်၊ လူမျိုမှ လူမျိုးပျောက်မည်
ဒါကြောင့် သာသနာကို ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ သူများဟာ ကိုယ့်ဘာသာကို နှောင့်ယှက်တဲ့သူများကို
ခုခံကာကွယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အလျှော့ပေးလို့ မဖြစ်ဘူး။
အလျှော့ပေးရင် ကန်းတက်ပြီး ပိုပြီးတော့ စော်ကားလာလိမ့်မယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘင်္ဂလားနယ်စပ်ဒေသမှာ ဆိုရင် ဘာသာခြား အဆောက်အဦးတွေကို
မြောက်မြားစွာ တွေ့ရတယ်။ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ အတော်ကို ရှာကြည့်ရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာလူမျိုးပျောက်နေတာဟာ နိုင်ငံနှင့်သာသနာအတွက်
မြေမျိုလို့ လူမျိုးမပျောက်၊ လူမျိုမှ လူမျိုးပျောက်မည်´ တဲ့ သတိ ၀ိရိယ ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ့်အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ အခြားသော ဘာသာများကို
သတိထားရမယ်။ ` သူတို့ ဘာလုပ်နေကြသလဲ´ ဆိုတာကို မျက်ခြေမပြတ် ကြည့်ဖို့
`ညောင်သီးလည်း စား၊ လေးသံလည်း နားထောင်ပါ´
အနှစ်ကိုးပါးတရားတော် (သီတဂူ ဆရာတော်)
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 9:41 PM No comments:
အရှင်ကောဝိဒ (ယော) | 10:15 AM | အရှင်ကောဝိဒ (ယော) Be the first to comment!
အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်မှ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှင့် ဆက်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို ထုတ်နှုတ်ပြဆို လိုက်ပါသည်။ ဖတ်ရှုဆင်ခြင်၍ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတောအုပ်မှ ထွက်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။
၁၃၀။ ရဟန်းတို့ အကြင် ရဟန်းတို့သည် အဓမ္မကို `ဓမ္မ´ ဟု ပြကုန်၏၊ ရဟန်းတို့ ထိုရဟန်းတို့သည် လူအများ၏ အစီးအပွါးမဲ့ခြင်းငှါ လူအများ၏ ချမ်းသာမဲ့ခြင်းငှါ လူအများ၏ အကျိုးမဲ့ခြင်းငှါ နတ်လူတို့၏ အစီးအပွါးမဲ့ခြင်းငှါ ဆင်းရဲခြင်းငှါ ကျင့်သည် မည်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့ ထိုရဟန်းတို့သည် များစွာသော အကုသိုလ်ကိုလည်း ဖြစ်ပွါးစေသည် မည်ကုန်၏၊ ထို ရဟန်းတို့သည် ဤသာသနာတော်ကိုလည်း ကွယ်ပျောက်စေသည် မည်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၂၉၈။ ရဟန်းတို့ ဤမှားသော မြင်ခြင်း `မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ´ တရားသည် မဖြစ်ပေါ်သေးသော အကုသိုလ်တရားတို့၏လည်း ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော အကုသိုလ်တရားတို့၏လည်း အဖန်ဖန် ပြန့်ပြောစွာဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ဤအတူ မဖြစ်ပေါ်သေးသော အကုသိုလ် တရားတို့၏လည်း ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော အကုသိုလ်တရားတို့၏လည်း အဖန်ဖန် ပြန့်ပြောစွာ ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို့ မှားသော မြင်ခြင်း `မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ´ အယူရှိသော သူအား မဖြစ်ပေါ် သေးသော အကုသိုလ် တရားတို့သည်လည်း ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော အကုသိုလ်တရားတို့ သည်လည်း အဖန်ဖန် ပြန့်ပြောစွာ ဖြစ်ခြင်းငှါ ဖြစ်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၃၀၀။ ရဟန်းတို့ ဤမှားသောမြင်ခြင်း `မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ´တရားသည် မဖြစ်ပေါ်သေးသော ကုသိုလ်တရားတို့၏လည်း မဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော ကုသိုလ်တရားတို့၏လည်း ဆုတ်ယုတ်ကြောင်းဖြစ်သကဲ့သို့၊ ဤအတူ မဖြစ်ပေါ်သေးသော ကုသိုလ်တရားတို့၏လည်း မဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော ကုသိုလ်တရားတို့၏လည်း ဆုတ်ယုတ်ကြောင်းဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို့ မှားသော မြင်ခြင်း `မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ´ အယူရှိသော သူအား မဖြစ်ပေါ်သေးသော ကုသိုလ်တရား တို့သည်လည်း မဖြစ်ပေါ်ကုန်၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော ကုသိုလ်တရားတို့သည်လည်း ဆုတ်ယုတ်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ (၃)
၃၀၂။ ရဟန်းတို့ ဤမသင့်လျော်သော အကြောင်းအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း `အယောနိသော မနသိကာရ´ တရားသည် မဖြစ်ပေါ်သေးသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား၏လည်း ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား၏လည်း တိုးပွါးကြောင်း ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ဤအတူ မဖြစ်ပေါ်သေးသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား၏လည်း ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား၏လည်း တိုးပွါးကြောင်းဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို့ မသင့်လျော်သော အကြောင်းအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသော သူအား မဖြစ်ပေါ်သေးသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားသည်လည်း ဖြစ်ပေါ်၏၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားသည်လည်း တိုးပွါး၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ (၅)
၃၀၄။ ရဟန်းတို့ ဤမှားသောမြင်ခြင်း `မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ´တရားသည် သတ္တ၀ါတို့ ကိုယ်ခန္ဓာ ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ချမ်းသာကင်းသော မကောင်းသော လားရာ ပျက်စီး၍ ကျရောက်ရာ ငရဲသို့ ရောက်ကြောင်း ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ဤအတူ သတ္တ၀ါတို့ ငရဲသို့ ရောက်ကြောင်း ဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါ မမြင်။ ရဟန်းတို့ မှားသော မြင်ခြင်း `မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ´ အယူရှိကုန်သော သတ္တ၀ါတို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ချမ်းသာကင်းသော မကောင်းသောလားရာ ပျက်စီး၍ ကျရောက်ရာ ငရဲသို့ ရောက်ရကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ (၇)
၃၀၆။ ရဟန်းတို့ မှားသော မြင်ခြင်း `မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ´ အယူရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အား အယူအားလျော်စွာ အပြည့်အစုံ ဆောက်တည်အပ်သော ကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အကြင် ကာယကံသည်လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုအပ်သော အကြင်ဝစီကံသည် လည်းကောင်း ။ပ။ အယူအားလျော်စွာ အပြည့်အစုံဆောက်တည်အပ်သော စိတ်ဖြင့် ကြံစည်အပ်သော အကြင် မနောကံသည် လည်းကောင်း၊ အကြင်စေ့ဆော်ခြင်း `စေတနာ´သည် လည်းကောင်း၊ အကြင် တောင့်တခြင်း `ပတ္ထနာ´သည် လည်းကောင်း၊ အကြင် စိတ်ကို ဆောက်တည်ခြင်း `ပဏိဓိ´သည် လည်းကောင်း အကြင် ပြုပြင်ခြင်း `သင်္ခါရ´ တို့သည်လည်းကောင်း ရှိကုန်၏၊ အလုံးစုံသော ထိုတရား တို့သည် မလိုလားခြင်းငှါ မနှစ်သက်ခြင်းငှါ နှလုံးကို မပွါးစေခြင်းငှါ အစီးအပွါးမဲ့ခြင်းငှါ ဆင်းရဲခြင်းငှါ ဖြစ်ကုန်၏။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူ- ရဟန်းတို့ ထိုသူ၏ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူသည် ယုတ်ညံ့သည်သာ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ ရဟန်းတို့ ဥပမာ သော်ကား စိုစွတ်သော မြေ၌ စိုက်ပျိုးအပ်သော တမာမျိုးစေ့သည်လည်းကောင်း၊ သပွတ်ခါးမျိုးစေ့သည် လည်းကောင်း၊ ဘူးခါးမျိုးစေ့သည် လည်းကောင်း အကြင် မြေသြဇာကိုလည်း ယူ၏၊ အကြင်ရေသြဇာကိုလည်း ယူ၏၊ ထို အလုံးစုံသော မြေသြဇာ ရေသြဇာသည် ခါးခြင်း သက်ခြင်း မချိုခြင်းငှါ ဖြစ်၏။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်း ဟူမူ- ရဟန်းတို့ မျိုးစေ့သည် ယုတ်ညံ့သည်သာဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ (၉)
၃၀၈။ ရဟန်းတို့ တစ်ယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် လောက၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော် လူအများ၏ အစီးအပွါးမဲ့ခြင်းငှါ လူအများ၏ ချမ်းသာမဲ့ခြင်းငှါ လူအများ၏ အကျိုးမဲ့ခြင်းငှါ နတ်လူတို့၏ အစီးအပွါးမဲ့ခြင်းငှါ ဆင်းရဲခြင်းငှါ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ထို တစ်ယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည် အဘယ်နည်းဟူမူ-- ဖောက်ပြန်သောအားဖြင့် မြင်တတ်သော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တည်း၊ ထို ပုဂ္ဂိုလ်သည် လူအများကို သူတော်ကောင်းတရားမှ ကင်းကွာစေ၍ မသူတော်တရား၌ တည်စေ၏။ ရဟန်းတို့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသော ဤပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် လောက၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော် လူအများ၏ အစီးအပွါးမဲ့ခြင်းငှါ လူအများ၏ ချမ်းသာမဲ့ခြင်းငှါ လူအများ၏ အကျိုးမဲ့ခြင်းငှါ နတ်လူတို့၏ အစီးအပွါးမဲ့ခြင်းငှါ ဆင်းရဲခြင်းငှါ ဖြစ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ (၁)
၃၁၀။ ရဟန်းတို့ ဤမှားသောမြင်ခြင်း `မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ´သည် ကြီးလေးသော အပြစ်ရှိသကဲ့သို့၊ ဤအတူ ကြီးလေးသော အပြစ်ရှိသော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို့ ကြီးလေးသော အပြစ်ရှိသော အကုသိုလ်ကံတို့သည် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာလျှင် လွန်ကဲခြင်းရှိကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ (၃)
၂၈။ ရဟန်းတို့ မကောင်းသော မြင်ခြင်း `မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူ´ ရှိသောသူအား ငရဲဘုံ `နိရယဂတိ´၎င်း၊ တိရစ္ဆာန်မျိုး `တိရစ္ဆာနဂတိ´၎င်း ဤလားရာ `ဂတိ´ နှစ်မျိုးတို့တွင် တမျိုးမျိုးသော လားရာ `ဂတိ´ ကို မချွတ်ရလိမ့်မည် ဟု မြှော်လင့်အပ်၏ ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ (၇)
၆၄။ ရဟန်းတို့ အကြင် အဓိကရုဏ်း၌ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တို့တွင် အပြန်အလှန် ဆဲရေးပုတ်ခတ်ခြင်း `၀စီသံသာရ´သည် လည်းကောင်း၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကို မှီ၍ ဖြစ်သော အနိုင်အထက် ပြုလိုခြင်း `ဒိဋ္ဌိပဠာသ´သည်လည်းကောင်း၊ စိတ်ထိခိုက်ခြင်း `စေတောအာဃာတ´သည် လည်းကောင်း၊ မကျေနပ်ခြင်း `အပ္ပစ္စယ´သည် လည်းကောင်း၊ မနှစ်မြို့ခြင်း `အနဘိရဒ္ဓိ´သည် လည်းကောင်း မိမိ၏စိတ် (မိမိပရိသတ်၏စိတ်) ၌ မငြိမ်းအေး မပြေပျောက်သည် ဖြစ်အံ့၊ ရဟန်းတို့ ထိုအဓိကရုဏ်း၌ ရှည်မြင့်စွာ တည်ခြင်းငှါ နှုတ်ဖြင့် ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုခြင်းငှါ တုတ်လက်နက် စသည်ဖြင့် ရိုင်းပြစွာ ပြုမူခြင်းငှါ ဖြစ်လတ္တံ့၊ ရဟန်းတို့သည်လည်း ချမ်းသာစွာ မနေရကုန် လတ္တံ့ ဟူသော အပြစ်ကို (မချွတ်ရလိမ့်မည်) ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။
ရဟန်းတို့ အကြင် အဓိကရုဏ်း၌ကား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တို့တွင် အပြန်အလှန် ဆဲရေးပုတ်ခတ်ခြင်း `၀စီသံသာရ´သည် လည်းကောင်း၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကို မှီ၍ ဖြစ်သော အနိုင်အထက် ပြုလိုခြင်း `ဒိဋ္ဌိပဠာသ´ သည်လည်းကောင်း၊ စိတ်ထိခိုက်ခြင်း `စေတောအာဃာတ´သည် လည်းကောင်း၊ မကျေနပ်ခြင်း `အပ္ပစ္စယ´သည် လည်းကောင်း၊ မနှစ်မြို့ခြင်း `အနဘိရဒ္ဓိ´သည် လည်းကောင်း မိမိ၏စိတ် (မိမိပရိသတ်၏စိတ်) ၌ ငြိမ်းအေး ပြေပျောက်သည် ဖြစ်အံ့။ ရဟန်းတို့ ထိုအဓိကရုဏ်း၌ ရှည်မြင့်စွာ တည်ခြင်းငှါ နှုတ်ဖြင့် ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုခြင်းငှါ တုတ်လက်နက်စသည်ဖြင့် ရိုင်းပြစွာ ပြုမူခြင်းငှါ မဖြစ်လတ္တံ့၊ ရဟန်းတို့သည်လည်း ချမ်းသာစွာ နေရကုန်လတ္တံ့ ဟူသော ဤအကျိုးကို (မချွတ် ရလိမ့်မည်) ဟု မျှော်လင့်အပ်၏ ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ (၁၂)
၁၂၆။ ရဟန်းတို့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ပေါ်ရန် အကြောင်းတို့သည် ဤနှစ်မျိုးတို့တည်း။ အဘယ်နှစ်မျိုးတို့နည်း ဟူမူ- တစ်ပါးသူထံမှ မသူတော် တရားသံကို ကြားနာရခြင်း လည်းကောင်း၊ မသင့်လျော်သော အကြောင်းအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း လည်းကောင်း တို့တည်း။ ရဟန်းတို့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ပေါ်ရန် အကြောင်းတို့သည် ဤနှစ်မျိုး တို့ပေတည်း ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ (၈)
၈ - မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသုတ်
၁၁၈။ ရဟန်းတို့ တရားငါးမျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းမိန်းမသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ငရဲ၌ ဖြစ်ရ၏။
(ဉာဏ်ဖြင့်) မစိစစ် မသက်ဝင်မူ၍ မချီးမွမ်းထိုက်သူ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ချီးမွမ်းပြောဆို၏။
(ဉာဏ်ဖြင့်) မစိစစ် မသက်ဝင်မူ၍ ချီးမွမ်းထိုက်သူ၏ ကျေးဇူးမဲ့ကို ကဲ့ရဲ့ပြောဆို၏။
မှားယွင်းသော အယူလည်း ရှိ၏။
မှားယွင်းသော အကြံအစည်လည်း ရှိ၏။
သဒ္ဓါတရားဖြင့် လှူအပ်သော ပစ္စည်းကို ဖျက်ဆီး၏။
ရဟန်းတို့ ဤတရားငါးမျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းမိန်းမသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ငရဲ၌ ဖြစ်ရ၏။
၆ - အဿာဒသုတ်
၁၁၂။ ရဟန်းတို့ တရားတို့သည် ဤသုံးမျိုးတို့တည်း။
အဘယ် သုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူ သာယာအပ်သည်၏ အစွမ်းဖြင့် ဖြစ်သော `အဿာဒ´ ဒိဋ္ဌိ။
အတ္တဘောသို့ အစဉ်လိုက်၍ ဖြစ်သော `သက္ကာယ´ ဒိဋ္ဌိ။
မှားသောအားဖြင့် မြင်မှုဟု ဆိုအပ်သော (ခြောက်ဆယ့်နှစ်ပါးသော) မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့တည်း။
ရဟန်းတို့ တရားတို့သည် ဤသုံးမျိုးတို့တည်း။
ရဟန်းတို့ ဤသုံးမျိုးသော တရားတို့ကို ပယ်ရန် တရားသုံးမျိုးတို့ကို ပွါးများ အပ်ကုန်၏။
`အဿာဒ´ ဒိဋ္ဌိကို ပယ်ရန် အနိစ္စသညာကို ပွါးများအပ်၏။
သက္ကာယဒိဋ္ဌိကို ပယ်ရန် အနတ္တသညာကို ပွါးများအပ်၏။
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကို ပယ်ရန် သမ္မာဒိဋ္ဌိကို ပွါးများအပ်၏။
ရဟန်းတို့ ဤသုံးမျိုးသော တရားတို့ကို ပယ်ရန် ဤတရားသုံးမျိုးတို့ကို ပွါးများ အပ်ကုန်၏ ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၁ - အဗျာကတသုတ်
၅၄။ ထိုအခါ ရဟန်းတစ်ပါးသည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရားကို ရိုသေစွာရှိခိုး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်လျက် မြတ်စွာဘုရားအား ဤစကားကို လျှောက်၏-
`အသျှင်ဘုရား အကြားအမြင်ရှိသော အရိယာတပည့်အား မဖြေဆိုအပ်သည့် အရာ `အဗျာကတ၀တ္ထု´ တို့၌ မဝေခွဲနိုင်မှု `၀ိစိကိစ္ဆာ´ မဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းကား အဘယ်ပါနည်း၊ အထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်း´ ဟု (လျှောက်၏)။
ရဟန်း အကြားအမြင် ရှိသော အရိယာတပည့်အား မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့် အဗျာကတ၀တ္ထုတို့၌ မဝေခွဲနိုင်မှု `၀ိစိကိစ္ဆာ´ မဖြစ်၊ ရဟန်း `သတ္တ၀ါသည် သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏´ ဟူသော ဤအယူသည် မှားသော `မိစ္ဆာ´ အယူပင်တည်း။ ရဟန်း `သတ္တ၀ါ သည် သေပြီးသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်´ဟူသော ဤအယူသည် မှားသော `မိစ္ဆာ´ အယူပင်တည်း၊ ရဟန်း `သတ္တ၀ါသည် သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း ဟုတ်၏၊ မဖြစ်သည်လည်း ဟုတ်၏´ ဟူသော ဤအယူသည် မှားသော `မိစ္ဆာ´အယူပင်တည်း။ ရဟန်း `သတ္တ၀ါသည် သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်´ ဟူသော ဤအယူသည် မှားသော `မိစ္ဆာ´ အယူပင်တည်း။
ရဟန်း အကြားအမြင် မရှိသော ပုထုဇဉ်သည် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကို မသိ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ကြောင်းကို မသိ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ချုပ်ငြိမ်းမှုကို မသိ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကို မသိ။ ထိုပုထုဇဉ် ပုဂ္ဂိုလ်အား ထိုမှားသော `မိစ္ဆာ´ အယူသည် တိုးပွါး၏၊ ထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ တိုးပွါးသော ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပဋိသန္ဓေနေခြင်း အိုခြင်း သေခြင်း ပူဆွေးခြင်း ငိုကြွေးခြင်း ဆင်းရဲခြင်း နှလုံးမသာယာခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ မလွတ်၊ ဆင်းရဲအပေါင်းမှ မလွတ်ဟူ၍ ငါဆို၏။ (ပ)========
၁၇၄။ ရဟန်းတို့ မှားယွင်းသော အယူ `မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ´ ကိုလည်း လောဘ အကြောင်းခံ၊ ဒေါသ အကြောင်းခံ၊ မောဟ အကြောင်းခံ ရှိ၏ဟု သုံးမျိုး ငါဟော၏။
Posted by အရှင်ကောဝိဒ (ယော) at 10:15 AM No comments:
မေတ္တာတံခွန် | 11:10 PM | ဆူနာမီ | အရှင်လောကနာထ9Comments so far
၀မ်းသာမိပါသည် ဆူနာမီ... ပို့စ် ပြန်တင်ခြင်း...
တပည့်တော် အသိပေးမှုကြောင့် ခဏ ပိတ်ထားတဲ့ပို့စ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အသိလွဲမှာ စိုးလို့ ပြန်ဖွင့်ပေးထားလိုက်ပါတယ်...
သစ္စာက ဖြေရှင်းချက်ဆိုလို့ ပိတ်ထားတဲ့ ပို့စ်အဟောင်း ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ဘာသာခြားတွေထက် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အမြင်အသိမှန်ဖို့ ၇-ရက်နေ့မှာ
ဇွတ်ငြင်းနေတာထက် အေးချမ်းစွာ လမ်းမှန်ရောက်စေချင်ကြတာပါ...
ဆူနာမီ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ
အရှင်ဘုရားကို စင်တစ်ခုနဲ့ အပူဇော်ခံရတော့ ၀မ်းသာမိပါတယ်ဘုရား
ဒါပေမဲ့ ကြာရင် ဘုရားစင်နဲ့ အပြိုင် ဖြစ်လာမှာတော့ စိုးရိမ်သား
စိုးရိမ်စရာတွေက တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆိုတာလို ထွက်လာနေလို့ပါ
အော် ဒီဘာသာရေးဆိုက်က ဒကာတွေ မတင်သင့်တာတွေ တင်နေတာပဲ
ဒုက္ခပါပဲလား ဒါမျိုးက သူငယ်ချင်းတွေ အပျော်ရိုက်ထားရင်လည်း
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းမျှ အပင်ပန်းခံ ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ ဒေသနာတော်ကို
ပညတ်ပါကွာဆိုပြီ အရှင်ဘုရား ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်ဘုရား။
ဒီပုံကိုတွေ့ရတော့ တပည့်တော်ရင်ထဲ မချိပါဘူးဘုရား
ဒါ့ကြောင့် ပုံပေါ်မှာ စာတွေ ရေးလိုက်ပါတယ်
စာထဲမှာပါတဲ့ ကိုယ်တော်ချောဆိုတာက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆဲဆို
ဘုရားပုံတော် ကြက်ချေခတ် ဘုန်းကြီးပုံတွေ ကြက်ချေခတ်နေတဲ့ ဘာသာခြားသူပါ
ခု ဘုရားသားတော်တစ်ပါးရဲ့ တရားစခန်း မြင်လိုက်ရတော့
ကိုယ်တော်ချောထက် အရှင်ဘုရားက ပိုဆိုးသွားပါပြီ
အရှင်ဘုရားရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကြည့်ပြီးနောက်
တပည့်တော်ကို မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ထေရ၀ါဒစစ်စစ် နှစ်သက်အောင် ပြုပေးခဲ့သူ ကျေးဇူးရှင်အားလုံးကို
ဒီနေရာနေ ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
တပည့်တော် သူတော်ကောင်း မထေရ်ကြီးများရဲ့ ထေရ၀ါဒကို မြတ်နိုးသူ ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
ဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒကာလေးတစ်ယောက်က မေးလျှောက်တော့
အဖြေရတော့မှ ပိုပြီး စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်ဘုရား...
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းပုံတော်ကို ပုံနှိပ်စက်က ပျက်ဆီးနေလို့ အရှင်ဘုရားကို လာလှူရင်တောင်
အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ ဒီလိုတရားထိုင်နေသူများအတွက် ခင်းပြီး မသုံးသင့်ပါဘူးဘုရား...
ဒီလောက်ကလေးတော့ အရှင်ဘုရား အသိဉာဏ်ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်...
အရှင်ဘုရားကပြောသေးတယ် ယောဂီတွေ တရားအားထုတ်တာ ပိုအရေးကြီးတယ်
ဒါ (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းပုံတော်) သတ်မှတ်ချက်ပဲလေတဲ့
အရှင်ဘုရားပါးစပ်က ထွက်လာသမျှ ရွံရှာဖွယ်ရာ အံ့သြစရာတွေချည့်ပါပဲဘုရား...
ဒကာဒကာမတို့ အမေးအဖြေ အသံလေးသာ နားထောင်ပါတော့ ၁ မိနစ်နဲ့ ၄၆ စက္ကန့်ထဲပါ
အရှင်ဘုရား ပညတ်ကို အတော်ပယ်ချင်နေတယ်
ဘုရားပုံတော် ဆင်းတုတော် သာသနာ့အလံ စသည်များ ပျက်ဆီးနေခဲ့သော်
ပုံပျက်အောင် ဖျက်ဆီးပြီး စွန့်ပြစ်ဖို့ ဆရာတော်ကြီးများက ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဘုရား
ခုတော့ အရှင်ဘုရား လုပ်လိုက်ပုံက
တရားကျင့်လိုတဲ့သူတွေ မတရားဖြစ်အောင် ဖျက်ဆီးလိုက်သလိုပါပဲ
ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ ဒီမယ်သီလ ဒီယောဂီတွေ ဘာတရားထူးရမယ် ထင်နေပါသလဲ
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်း ပုံတော်ပေါ် တရားထိုင်မှတော့
ဘာတရားမှ အရထူးမှာ မဟုတ်ပါဘူး တပည့်တော်ပြောပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို လက္ခံခဲ့ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ အရှင်ဘုရားမှာလည်း ဒီအချိန်ထိတော့ မထင်။
စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတော့ အနာဂါမ်မဖြစ်သေးတာ သေချာသွားပါပြီ။
ဒီဒကာမဆိုကြည့်စမ်း အ၀ိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ် တက်ထိုင်နေတယ်
အရှင်ဘုရား မျက်စိလေးဖွင့်ပြီး ဆွမ်းဒကာ ဒကာမတွေ တချက်ကလေး ငဲ့ကြည့်ပေးပါဘုရား။
အားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ အလယ်လမ်းမှန်ပေါ် ရောက်နိုင်ကြပါစေ...
(credit to ဒဿနခရီးစဉ်)
Posted by မေတ္တာတံခွန် at 11:10 PM9comments:
ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှါးရေးအသငျးခြုပျ၏ ရညျရှကျခကျြနှငျ့ ...
၀မ်းသာမိပါသည် ဆူနာမီ... ပို့စ် ပြန်တင်ခြင်း...( ဒဿ...